काम बिहिन बनाइए न्यायाधीश जोशी, राजीनामा देलान वा हाजिर गरेर सर्बोच्च परिसरमै भौतारिएलान ? – Mission Khabar
काम बिहिन बनाइए न्यायाधीश जोशी, राजीनामा देलान वा हाजिर गरेर सर्बोच्च परिसरमै भौतारिएलान ?
मिसन खबर २० पुष २०७५, शुक्रबार ०४:४१
काठमाडौं –संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सबै जिम्मेबारी खोसिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेशी नतोकिएका उनको नाम न्याय परिषद् सदस्यबाट पनि हटाइएको छ ।
अझ, उनीसँगै पुस २१ बाट अवकाश पाउन लागेका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेलाई पनि संवैधानिक इजलासको सदस्यमा राखिएन् । पुनर्गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अब दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सदस्य रहने भएकाछन् । यसअघि नै बरिष्ठतम न्यायधीशका रुपमा १ नम्बर इजलाशमा बस्दै आएका जोशीको कार्यकक्ष सर्बोच्चकै एनएक्स भवनमा सारिएको छ । जोशी बस्ने चेम्बर न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले पाएका छन् । वरिष्ठताका आधारमा कार्की जोशी पछिको दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।
बुधवार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका राणाले जोशीलाई राजीनामा दिएर ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न आग्रह गरेका थिए । काम बिहिन बनाइएका जोशी नैतिक शंकट ब्यहोरेर सर्बोच्चमै हाजिर गर्दै भैतारिन्छन वा बाहिरिन्छन यो भने अहिलेको प्रतिक्षा बनेको छ ।